Reiki Master kuporesa Pendant neiyo 7 chakras uye Reiki Dai Komyo - Nyika yeAmulets
Reiki Master kuporesa Pendant neiyo 7 chakras uye Reiki Dai Komyo
Iyi Yakasarudzika Reiki Kuporesa Pendant yeChakra Kuporesa ine 7 chakra kuenzanisa dhizaini uye iyo Dai Komyo chiratidzo chekumisikidza uye chakra kupora ndeye yakasarudzika pendant iyo inogona kushandiswa neese munhu kuchengetedza ako chakras muyero uye yakaitwa.
Ichi chinyorwa chinouya nekushanda kwako pachako neReiki Master yedu kunze kwekuti iwe uchitaura kuti unoda kuzviita iwe pachako
Chiratidzo chepasi chinonzi vortex yesimba. Iyi mweya chiratidzo chinokwezva ese akanaka simba uye ndokutumira kune yega chakra. Iwe unenge uchinzwa simba reichi pendendi iyo nguva yaunoisa pairi. Reiki varapi kutenderera pasirese vanoshandisa iyi pendendi yekuzviporesa ivo nevamwe.
Uyu tenzi pendant inogona kushandiswa kure kuresa, kupora pamoyo, kuzvirapa uye kuporesa kwevamwe Reiki masters vanogona kuishandisa zvakare kutanga zvimwe kana kubhadharisa uye kuchenesa zvinhu nenzvimbo.
Sei uchifanira kugara uchipfeka iyi Reiki Kuporesa Pendant?
Ngatitarisei kune chakras chakasiyana uye chii chingaitika kana isina kukwana:
Kutya, kutya, kusachengeteka, kana ungrounded; zvinhu zvenyama kana makaro; kusagadzikana kuchinja
Kusina pfungwa yekuve pamba kana kuchengeteka chero kupi zvako, asingatauri, asingakwanisi kupinda mumuviri wako, achitya kuregererwa
Overemotional, zvakakurumidza kuisa uye kuisa mune vamwe, kukwezva kumutambo, kunyangadza, kusina miganhu yega
Kushushikana, kusina chimiro, kuvhara kune vamwe, kusazviremekedza kana kuzvikudza, zvichida muukama hunoshungurudza
Kutonga, utsinye, kutsamwa, kukwana kana kuti kuzvidzivirira zvakanyanya kana vamwe
Kutadza, kusazvidzora, kunyara, kusazvidzivirira
Kuda nenzira yakanamatira, inokonzera; asisina manzwiro ega muukama; vanoda kuita hongu kune zvose; kushaiwa miganhu, kurega munhu wose
Hasha, kure, kusurukirwa, asingakwanisi kana kusada kuvhura vamwe, vane shungu
Kunyanya kukurukurirana, kusakwanisa kuteerera, kunyatsotsoropodza, kutaura zvisina kufanira, kuderedza
Introverted, kunyara, kuomerwa kutaura chokwadi, kusakwanisa kutaura zvido
Kunze kwekutaura kwechokwadi, kusava nekutonga kwakanaka, kusakwanisa kuisa pfungwa, kunowanzoita kuti zvive nyore
Hazvirevi mukufunga, kupfigirwa kune pfungwa itsva, zvakare zvichienderana nechiremera, kubviswa kana kusavimba nezwi romukati, kushungurudzika, kubatisisa kune zvakaitika kare uye kutya ramangwana
Akapindwa muhupenyu hwekunamata, asingateereri zvido zvemuviri, aine dambudziko rokudzora manzwiro
Hazvinyatsozarurirwa mune zvekunamata, haakwanisi kuisa kana kuchengeta zvinangwa, kusava nehutungamiri
Dhizaini iyi laser yakanyorwa pane 35mm dhayamita isina simbi pendant. Iwe unogona zvakare kuwana izvi yakarembera muSterling Sirivheri mhando
Wedu amulet tester Lety akanyora chinyorwa chakakura nezve akasiyana marapirwo amulets aakationgorora. Iye anonzwira tsitsi uye anopa kurapa kwakazara pamwe neReiki kuvepo uye kurapa kure. Ane ruzivo neringi reBuer, iyo Abraxas amulet uye mhete, iyo yekuchaja pad uye yeBuer lapel pini. Kana iwe uchida kuverenga pano izere mushumo pazvinhu izvi, enda apa: kuyedza kuporesa mazango